mairie-antananarivo – Andrefan’Ambohijanahary
Tsy misy idiran’ny CUA ny fandravana trano teny ny zoma teo
Manoloana ny fandravana trano tetsy Andrefan’Ambohijanahary ny herinandro teo dia mitondra izao fanazavana izao ny fiadidian’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), mba hisorohana ny savorovoro sy ny hevitra mety mampiahiahy ny mponin’Antananarivo.
Ady tany ifanaovan’ny olon-tsotra manokana sy ireo mponina monina eny an-toerana no zava-misy eo Andrefan’Ambohijanahary ary tsy misy idiran’ny CUA fa tsy araka ny feo iniana aely etsy sy eroa. Manaja tanteraka ny rafitra misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana amin’ny fisarahan’ny fahefana iandreketany ny Kaominina koa inoana fa samy tompon’andraikitra amin’izay tandrify azy ny tsirairay.
Na izany aza anefa dia ilaina ny fijerena ny mahaolona ka ny marimaritra iraisana ahitam-bahaolana no jerena voalohany hoy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’io fandravana trano tetsy Andrefan’Ambohijanahary. Isaorana ihany koa ireo solombavambahoaka voafidy tao amin’ny Boriborintany faha-4 nitondra ny anjara birikiny ho fitsimbinana ireo niharan’ny fandravana trano ireo.